मन्त्रीपरिषद्को निर्णय ः सप्तरी बाढी पीडितलाई २५ हजार राहत
सरकारले सप्तरीका बाढी पीडितलाई टहरा निर्माण र जस्तापाताका लागि तत्काल प्रतिपरिवार २५ हजार राहत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार सप्तरीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गरी बाढि पीडितलाई २५ हजार रुपैया उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ । साथै सबै बाढी पीडितलाई सोही मापदण्डमा राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी पीडितको बसोबासको व्यवस्था गर्न १५ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धतालाई पनि अनुमोदन गरेको छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार सप्तरीको बाढी प्रभावित क्षेत्रहरुको अवलोकन एवं निरिक्षण गर्नुभएको थियो । बाढीपीडित प्रभावित क्षेत्रहरुको अवलोकन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सम्पूर्ण बाढीपीडित परिवारलाई दुई बण्डल जस्तापाता खरीद गर्न रु. १५ हजार र टहरा निर्माणका लागि रु. १० हजार गरि रु. २५ हजार राहत दिने घोषणा गर्दै बाढीपीडितलाई ब्यापार गर्न रु. १५ लाखसम्मको सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने पनि प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो ।
असार १७ गते शुक्रबार परेको अविरल वर्षाका कारण सप्तरीको विभिन्न खोलामा आएको बाढीका कारण १४ परिवार विस्थापित भएको छ भने २ सय परिवार प्रभावित हुनुका साथै १ हजार ५ सय घर र हजारौं विगहा धानबाली डुवानमा परेको थियो ।